Recep Tayyip Erdoğan oo noqday madaxweynaha Turkiga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: R/wasaaraha xilka wareejinaya ee dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan ayaa ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha dalkaas, kadib markii shalay doorasho dhacday.
Waxaa doorashadan ku tartamay 3 musharrax oo kala ah: R/wasaaraha xilligaan, Recep Tayyip Erdoğan, Xoghayihii guud ee hore ee Ururka Iskaadhiga Islaamka (OIC), Ekmeleddin İhsan Oğlu iyo musharrax kazoo jeeda gobollada Kurdiyiinta oo lagu magacaabo Selahaddin Dmirattash.
Natiijada doorashada oo soo baxday ayaa waxaa 52.3% ku guuleystay Recep Tayyip Erdoğan, wuxuuna taageerayaashiisa u sheegay inuu guushiisu tahay mid usoo hoyatay Turkiga oo dhan.
“Hogaamiye uma noqon doona kaliya kuwii I doortay, hase ahaatee waxaan madaxweyne u noqon doonaa dhamaan 77-da Milyan ee dadka Turkiga” ayuu yiri Erdogan.
Taageerayaasha xisbiga AK ee uu hoggaamiyo Erdogan oo aad u fara badan ayaa xalay isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn ee Turkiga, iyagoo u dabaal-dagaya guusha hordhaca ah ee uu gaaray hoggaamiyahooda.
Reccep Erdogan oo ka socday xisbiga AK ayaa si aad ah uga hormaray labadii musharrax eek ala ahaa: Ekmeleddin İhsan Oğlu oo u tartamayay xisbiga CHP iyo Selahaddin Dmirattash oo u tartamayay xisbiga MHP.
Xisbiga AK ee haatan haya talada dalka Turkiga ayaa waxaa laga sugayaa iney soo magacabaan R/wasaare iyo sidoo kale hogaamiyaha xibigooda AK.
Madaxweynaha la doortay ee dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan ayaa xilka loo dhaarin doonaa 28-ka bisha August ee hadda socota.